Seranam-piaramanidina Ivato : orinasa malagasy 20 miaraka amin’ny CMBI | NewsMada
Seranam-piaramanidina Ivato : orinasa malagasy 20 miaraka amin’ny CMBI
Nampahalala ny fizotry ny asa eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, omaly, ny tale jeneralin’ny Ravinala airports, Vincent Devauchelle, sy ny tale lefitra ao amin’ny CMBI, Thibaut Servant. Mandroso araka ny tokony ho izy ny asa, hatramin’izao.
Miroso araka ny tokony ho izy ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Raha tamin’ny volana aogositra teo ny nanombohana ny asa fanaovana fototra, efa tafapetraka ankehitriny ireo andry 83 mirefy 20 m ny iray, iaingan’izany fototra izany. Azo lazaina fa efa vita eo amin’ny 66 % ny velarana hametrahana izany faritra vaovao izany. Efa atomboka izao ireo fototra fandraisana izany velarana izany, mitsangana na mitsivalana, araka ny lamina ara-teknika. Ravinala airports Ivato sy any Nosy Be, samy anehoana ny fizotry ny asa manaja ny fe-potoana nofaritana.
Tompon’antoka amin’ny asa ny Colas Madagascar sy ny Bouygues bâtiment international (CMBI). Mitarika ny orinasa malagasy 20 miara-miombon’antoka amin’ny fanatanterahana ny seranam-piaramanidina roa, Ivato sy any Nosy Be indray ny CMBI. Nomarihin’ny CMBI fa maro anisa ny Malagasy, teknisianina na mpiasa tsotra, amin’ny fanaovana izao asa izao. Misy 300 ny Malagasy miara-miasa amin’ireo orinasa frantsay roa lehibe ireo, eo Ivato sy any Nosy Be.
Ivato, hatomboka amin’ny volana janoary 2018 ny charpente, ary ny volana marsa 2018, hatomboka ny piste manana code E, hatao hahazaka sokajina fiaramanidina lehibe, araka ny fanazavan’ny teknisianina iray ao amin’ny CMBI. Raha tsy misy ny sampona, voahaja ny fepetra rehetra, tokony ho vita amin’ny volana septambra 2018 ny piste vaovao, araka ny fanazavana nentin’io teknisianina io ihany. Miasa ho an’ny tontolo iainana ihany koa ny Ravinala airports, manamboatra toby fanadiovan-drano. Ho vita amin’ny fiandohan’ny taona manaraka io izany fotodrafitrasa izany. Mbola hitohy hatrany ny asa aorian’izay …